Nọmba 6 Ihe Akwụkwọ Nsọ Pụtara - Ihe Bible Pụtara
iphone 6 ihuenyo mmetụ na -egbu maramara
iphone 5 anaghị akụ
kedu ihe ipad m ji na -ajụkwa oyi
kedu ka ịgbanwuo elekere apụl
Biblical Spiritual Significance Number 6
Ihe dị na Bible na mmụọ nke nọmba 6. Kedu ihe nọmba 6 pụtara n'ụzọ ime mmụọ?
A kpọtụrụ 6 aha ugboro 199 na Bible. Isii bụ ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke , n'ihi na e kere mmadụ na ụbọchị nke isii nke Okike . Isii ahụ gafere 7, nke bụ ọnụ ọgụgụ nke izu okè . Ọ bụ ọnụọgụ mmadụ nọ na nnwere onwe ya na -emezughị ebumnuche ebighi ebi nke Chineke. Na Ezikiel, a na -eji okpete eme ihe dị ka otu ihe. Mkpanaka dị mita atọ.
Bible na -eji okpete na -anọchite anya mmadụ . Mkpanaka a dị elu n'ile anya, n'agbanyeghị na ọ tọgbọ chakoo n'ime. Maka nke a, ọ na -agbaji n'ụzọ dị mfe. Mkpọda nsụda mmiri agaghị agbaji… (Aịza. 42: 3; Mt 12:20). Isiokwu ebe a bụ Onyenwe anyị Jizọs.
Otu ụbọchị Onyenwe anyị gara oriri agbamakwụkwọ na Kena. Kana pụtara ebe amị. N'ebe ahụ Onyenwe anyị Jizọs rụrụ ọrụ ebube mbụ ya. E nwere ite isii nke mmiri, mmiri wee gbanwee ghọọ mmanya dị mma site na Dinwenu anyị. Nke a na -egosi na ọmarịcha ịma mma ka ọrụ ebube nke ozi -ọma si agbanwe mmadụ, nke ite isii ahụ nọchiri anya ya na -enweghị isi, adịghị ike, na ọbụna nwụrụ anwụ ka ọ jupụta na ndụ Kraịst, ndụ nke na -esite n'ọnwụ.
Isii bụkwa nọmba ọrụ. Kaa akara ngwụcha nke okike dịka ọrụ Chineke. Chineke rụrụ ọrụ 6 ụbọchị wee zuru ike n'ụbọchị nke asaa. Ụbọchị nke asaa a bụ ụbọchị mbụ nke mmadụ, nke e kere n'ụbọchị nke isii. Dịka ebumnuche Chineke siri dị, mmadụ kwesịrị ibu ụzọ banye n'izu ike Chineke wee rụọ ọrụ ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga -edebe (Jen. 2:15).
Nke a bụ mmalite nke ozi -ọma. Ike na ume ịrụ ọrụ na -esitekarị n'izu ike, nke na -ekwu maka Kraịst. Mgbe ọdịda ahụ gasịrị, nwoke ahụ kewapụrụ onwe ya na Chineke, ihe atụ nke izu ike. Ka mmadụ na -arụ ọrụ, ọ naghị eru izu oke ma ọ bụ izu oke. Ọ bụ ya mere anyị ji abụ abụ: Ọrụ enweghị ike ịchekwa m.
Okpukpe niile na -agba ndị mmadụ ume ịrụ ọrụ maka nzọpụta ha. Ọrụ mbụ nke mmadụ, mgbe ọdịda dara, bụ ịdụ akwa akwụkwọ fig ka ọ rụpụta akwa akwa (Jen. 3: 7). Akwụkwọ ndị ahụ wee gwụchaa. Ọrụ anyị enweghị ike kpuchie ihere anyị. Jehova Chineke mekwara nwoke na nwunye ya uwe mgbokwasị wee yikwasị ha (Jen. 3:21). Onye ọzọ ga -anwụ, wụfuo ọbara ya iji weta nzọpụta. N'Ọnụ Ọgụgụ 35: 1-6, Chineke gwara Mozis ka o nye obodo mgbaba isii. Na nzaghachi maka ọrụ mmadụ, Chineke mere Kraịst ebe mgbaba anyị.
Ọ bụrụ na anyị anabata ya dịka ebe mgbaba anyị ma biri n'ime ya, anyị ga -akwụsị ọrụ anyị wee chọta izu ike na ezi udo. Obodo isii dị mma ichetara anyị adịghị ike dị n'ime anyị na omume anyị.
Ihe atụ ndị ọzọ nke ọnụọgụ isii gbasara echiche 'ọrụ' bụ ndị a: Jekọb jeere Leban nwanne nna ya ozi afọ isii maka anụ ụlọ ya (Jen. 31). Ndị ohu Hibru ga -eje ozi afọ isii (Ọpụ. 21). Ruo afọ isii, a ga -agha ala ahụ (Lv. 25: 3). Ụmụ Izrel kwesịrị ịgba obodo Jeriko gburugburu otu ugboro n'ụbọchị ruo ụbọchị isii (Js.6). Ihe nrịgo isii dị n’ocheeze Solomọn (2 Kr. 9:18). Ọrụ mmadụ nwere ike ịkpọga ya n'oche kachasị mma n'okpuru anyanwụ. Agbanyeghị, nrịgo 15 ma ọ bụ 7 + 8 dị mkpa iji gbagoo n'ụlọ nsọ, ebe ụlọ Chineke (Ez. 40: 22-37).
A ga -emechi ọnụ ụzọ ogige dị n'ime nke ụlọ nsọ Ezikiel, nke chere ihu n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ụbọchị isii nke ọrụ (Ez. 46: 1).
Nọmba ezughị okè
Ndị Gris ewerela ọnụọgụ isii, yana ọbụna ndị Gris oge ochie n'onwe ha, dịka ọnụọgụ niile. Ha rụrụ ụka na isii bụ mkpokọta nkewa ha: 1, 2, 3 (agunyeghi ya): 6 = 1 + 2 + 3. Nọmba zuru oke nke na -esote bụ 28, ebe 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Ugbu a, dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, nke a bụ ọnụọgụ zuru oke nke ezughị oke. Mmadụ nwere ebe kachasị elu n'etiti ndụ ndị e kere eke. Chineke kere ọtụtụ ndụ n'usoro n'usoro n'ime ụbọchị isii.
Ihe e kere eke ruru ọnụ ọgụgụ kasị elu n'ụbọchị nke isii n'ihi na, n'ụbọchị a, Chineke kere mmadụ dịka onyinyo ya na oyiyi ya si dị. Ndụ kacha elu nke ekepụtara ga -ezu oke ma ọ bụrụ na ọ ga -anọ naanị ya na eluigwe na ụwa na -ejighị ya tụnyere ndị ọzọ. Ìhè nke kandụl ga -ezu oke ma ọ bụrụ na ìhè anyanwụ anaghị enwu. Mgbe e debere nwoke ahụ n'ihu osisi nke ndụ,
Naanị mgbe mmadụ nabatara Kraịst dịka Onye nzọpụta ya na ndụ Ya, mgbe ahụ ka a ga -emecha ya n'ime ya. Na Job 5:19, anyị na -agụ: N'ime mkpagbu isii ọ ga -anapụta gị, na nke asaa, ihe ọjọọ agaghị emetụta ya. Mkpagbu isii adịworị anyị ike; ọ na -anọchi anya mkpagbu gabigara ókè. Agbanyeghị, ike nke nnapụta Chineke anaghị egosipụta onwe ya nke ukwuu dịka mgbe mkpagbu ruru oke ha: asaa.
Onyinye Boaz nyere Rut: Mpekere ọka bali isii (Rt. 3:15), n'ezie, dị ebube. Mana Boaz ga -eme ihe ọzọ: ọ ga -abụ onye mgbapụta Rut. Njikọ nke Boaz na Rut kpalitere Eze Devid, na kwa, dị ka anụ ahụ si dị, onye tọrọ Devid bụ Onyenwe anyị Jizọs. Tupu nke ahụ emee, ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ọka bali isii ahụ ga -eju Rut anya,
GỊNỊ KA NỌMBA 4 Pụtara NA BAỊBỤL?
777 Pụtara Akwụkwọ Nsọ, Nọmba Chineke
NTỤKWASỊ BIBLIC NA NKỌ NKE NA ỌHỤRỤ
Gịnị Ka Nọmba 6 Pụtara na Baịbụl?
Kedu ihe bụ mkpa mmụọ nke Orion?
IHE BAỊBỤL PỤTARA NỌMBA 3